FAAH-FAAHIN:Madaxweyne Gaas oo Furay shirka wada tashiga iyo Midnimada Beelaha Puntland – Radio Daljir
Agoosto 25, 2015 9:10 b 0
Talaado, Ogoosto 25, 2015 (Daljir) —Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 25-8-2015 Daahfuray Shirweynaha Wada-tashiga Puntland wajigiisa koowaad oo maanta ka furmay magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobalka Mudug, waxaana uu soconayaa 25-29-ka bishaan.
Shirweynahaan ayaa waxaa kasoo qeyb-galay Ergooyin badan oo isugu jira rag iyo dumar laga soo kala xulay Gobalada Puntland , waxaana sidoo kale goob joog ahaa Madasha shirka Wasiiro, Xildhibaano, Waxgarad iyo masuuliyiin kale duwan.
Ujeeda guud ee shirka ayaa ah in la adkeeyo wada jirka Bulshada Puntland, lana taban-taabiyo Nabadda, kalsooniada iyo is aaminaada bulshada , lana xaqiijiyo midnimada umadda iyada oo la marayo hirgelinta nidaamka xisbiyada badan .
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo khudbad taariikhi ah ka jeediyey madasha shirka ayaa ergooyinka ka qeyb-galaya shirka uga mahadceliyey ka qeyb-galka shirweynahaan Qaran, isagoona ku bogaadiyey in ay soo saaraan qodobo wax ku ool ah .
‘’ Qorshihii reer Puntland ee aheyd markii hore idinku is dhisa , kadibna Soomaali baadi gooba waa lagu guulaystay , waxay dhinaca kale keentay hoos u dhac dhaqaale , taasoo sababtay in Puntland dhumiso deegaan iyo dad , dadku waxay isweydiinayaan in dhaqaalaha iyo dadkaa lageeyo Xamar , waxaan qabaa inay sax aheyd sababtoo ah madaxdii Puntland ee markaa waxaa ay ka duulayeen in la helo midnimo Soomaaliyeed ‘’ Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
‘’ Puntland si ay ula jaanqaado horumarka dhaqaale , amni iyo bulsho ee caalamku higsanayo maanta , waa in Puntland isbedel dhab ah ku sameysaa haykalkeeda Dawliga ah iyo kuwa gaar ka ah , waana in la helaa amni iyo Nabadgelyo taaba-gal ah , waana in la helaa maalgashi xor ah oo horseeda horumar dhaqaale ‘’ Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ugu baaqay Puntland deriskeeda dhow iyo kan fogba Nabad-gelyo iyo wada noolaansho , waxaana uu sheegay in cidkasta oo Puntland ogol Puntland ay ogoshahay
‘’ Waxaa laydinka rabaa idinka shirka jooga wadadii lagu gaari lahaa Nabadda iyo Horumarka , wadadaas waxaa kow ka ah midnimada reer Puntland , Puntland oo hal mab da’a leh meelna uwada jeeda ayaa laydinka rabaa ‘’ Ayuu hadalkiisa sii raaciyey Madaxweynuh.
Shirka ayaa waxaa sidookale laga rabaa in lagu xoojiyo xiriirka bulsho ee Puntland, iyadoo laga shidaal qaadanayo rabitaankii jiray shirweynihii lagu asaasay Puntland 1998-dii lana tixgeliyo daruufaha jira .
Sidoo kale In la dhexdhexaadiyo beelaha ay colaadu ka dhaxeyso ee aan weli la xalin , lagana tashado maareynta khilaafaadka ku salaysan dhul-daaqsimeedka , kheyraadka iyo aanada qabiil, iyada oo laga ambaqaadayo rabitaanka bulshada Puntland iyo hogaankeeda , si dhidibada loogu taago Nidaam siyaadaseedka xisbiyada Puntland , dibna loogu bilaabo.
Bulshada Gobolka Nugaal oo Ka shiray Sidii Waddo laami ah looga Hirgalin lahaa Eyl